Sifooyinka iyo daryeelka bisadda Chocolate Shukulaatada quruxda badan | Bisadaha Noti
Bisad shukulaatada York, oo ah tan dhogorta leh ee dooneysa inay noqoto bakhaar
Haddii aad jeceshahay bisadaha leh dhogor madow oo aad jeceshahay inaad haysato mid sidoo kale leh jaakad dhaadheer oo jilicsan, nooca Shukulaatada York waxay noqon kartaa midka aad raadineyso. Ninkan dhogorta leh ee dhexdhexaadka ahi wuxuu leeyahay muuqaal caqli badan, oo ka tarjumaya dabeecaddiisa.
Isagu waa soojire jilicsan oo jecel inuu barto waxyaabo cusub iyo, sida dhammaan bahda guriga, noqo bartamaha dareenka qofka aad ugu jeceshahay.
1 Asalka iyo taariikhda bisadda Shukulaatada York
4 Daryeelka bisadda shukulaatada York
5 Immisa ayey ku kacaysaa bisadda Shukulaatada York?
6 Sawirada Shukulaatada York
Asalka iyo taariikhda bisadda Shukulaatada York
80-yadii ayaa bisad magaceeda la odhan jiray Blacky oo ku noolayd beer ku taal magaalada New York ay martay wadooyin iyada oo la socota bisaddii Smokey ee baadi-goobka ahayd. Kittens-yada dhashay waa inay ahaadaan kuwo qurux badan, gaar ahaan mid leh dhogor badan oo midab shukulaato leh. Xanaaqa yar ayaa dareen badan ku soo jiiday bini aadamkiisa, si aad u badan taas oo keentay inuu isaga ka dhigo xaafada uu ku noolaa.
Sidaa darteed, in yar oo ka mid ah wuxuu noqday mid caan ah, tan iyo markii lagu daray inuu qurux badnaa wuxuu ahaa mid aad u jecel oo naxariis badan. Dhamaadkii 80-meeyadii waxaa horey u jiray dhowr nuqul oo ah noocyadan, iyo 90-meeyadii heerka ayaa la sameeyay. Maanta waxaa loo aqoonsan yahay inay yihiin nooc ka mid ah ururada CFF iyo ACFA.
Bisad Shukulaatada York Waa timo dhexdhexaad ah, oo culeyskeedu yahay 5-6kg ragga iyo in yar oo dhedig ah. Jidhka waxaa ilaaliya lakab aad u tiro badan oo timo-midab shukulaato ah. Waxay ku yeelan kartaa baro cad cad wajigeeda ama dabada.
Waa xayawaan adag, oo leh murqo muruq fiican, oo si fiican loo le'eg yahay. Madaxiisu xoogaa wuu dheeryahay. Indhuhu waa cagaar, bunni ama dahab, dhegahana waa la tilmaamayaa.
Jilaagayagu wuxuu leeyahay dabeecad aan caadi ahayn. Isagu waa mid aad u xiiso badan, qosol badan oo caqli badan. Wuxuu ku raaxeeyaa labadaba hurdo yar iyo inuu la ciyaaro kuwa isaga ugu dhow. Waxa kale oo uu jecel yahay in la salaaxo oo la koolkooliyo; in kasta oo ay tahay inaan ogaano inuu xoogaa ku xeel dheer yahay shisheeyaha, laakiin ma jiraan wax bisadu daaweyso aysan xallin karin 😉.
Leh heer tamar sare leh, sidaa darteed waa lagama maarmaan in waqti loo huro si aad u gubto oo aad u degto.
Daryeelka bisadda shukulaatada York
Sawir - Petsionary.com
Ahaanshaha xayawaan cunno waxay lagama maarmaan noqon doontaa in la siiyo quudin hodan ku ah borotiinka xoolaha ee aan lahayn badarka, ama sii cunto dabiici ah oo dheeri ah sida Yum Cunto loogu talagalay bisadaha, Summum ama wixii lamid ah.
Maalin kasta waa inaad ku cadaydaa kaar, iyo toddobaadle ku nadiifi indhaha iyo dhegaha faashad nadiif ah. Ha ku maydhin isaga, maxaa yeelay isagu uma baahna (ilaa uu ka joojiyo is qurxinta ama ay wasakh xad dhaaf ah yeeshaan, dabcan).
Maalin kasta waa inaad la ciyaarto isaga si uu u jimicsado ugana ilaaliyo inuu gurigiisa qas ku sameeyo. Si tan loo sameeyo, waxaad ka iibsan kartaa alaabada lagu ciyaaro bakhaarka keydka xoolaha, ama adigu iyaga ka samayso kartoon ama xarig.
Sawir - Wikipets.es
In kasta oo ay tahay nooc caafimaad wanaagsan leh, markasta oo aad ka shakido inuu caafimaad qabo waa inaad geysaa dhakhtarka xoolaha si loo baaro loona siiyo daaweynta ku habboon. Intaas waxaa sii dheer, waa inaad sidoo kale u tagtaa takhasuska si aad u geliso microchip, ka tallaallada iyo maxaa loogu talagalay qalcad hadaadan rabin inaad sameysato
Sidoo kale, waxaa muhiim ah inaad saxarada ka saarto ciidda, oo aad nadiifiso saxaaraddiisa hal mar asbuucii ama bishii. Tallaabooyinkani waxay gacan ka geysan doonaan sidii loo hubin lahaa caafimaadka wanaagsan ee doofaarka, iyo sidoo kale nabada maskaxda.
Immisa ayey ku kacaysaa bisadda Shukulaatada York?
Miyaad gebi ahaanba ka go'antahay inaad iibsato bisad yar oo Shukulaatada York ah? Hadday sidaas tahay, ugu horreyntii Waa muhiim in, haddii aad dad badan la nooshahay, aad weydiisid inay iyagana guriga ku jecelyihiin. Waana marka xayawaan la geeyo guri aan dhammaan dadka isku deegaanka ahi isku raacsanayn, way fududahay in dhibaatooyin soo baxaan ... midka dhogorta badani waa kan had iyo jeer ka soo baxa si xun.
Sidaa darteed, kaliya marka go'aanka la wada gaaro dhammaan, waxay noqon doontaa waqtigii la bilaabi lahaa raadinta meelaha taranka ee taranka. Mar alla markii aad hesho, waa inaad ogaataa in eey yar uusan ka go'i doonin hooyadiis ugu yaraan illaa uu ka gaarayo siddeed toddobaad, maaddaama da'daas yar ay u baahan tahay inay caano cabto iyo sidoo kale, inay barato inay u dhaqanto sida bisadda oo kale.
Sida qiimaha, waxay noqon doontaa agagaarka 800 euros. Haddii aad ka iibsaneyso dukaanka xayawaanka, qiimaha waxaa laga yaabaa inuu ka hooseeyo.
Sawirada Shukulaatada York
Shukulaatada York waa mid dhogor badan oo farxad u ah in la ilaaliyo. Waxay leedahay culays, haybad, iyo indho ... inayna macquul ahayn in la iloobo. Sidaa darteed, hoosta waxaan kaaga tagi doonnaa sawirro taxane ah oo ah bisaddan xiisaha leh:
Sawir - keyword-suggestions.com
Sawirka - Sawirada-of-cats.org
Sawir - Cat-list.blogspot.com.es
Wadada buuxda ee maqaalka: Bisadaha Noti » Bisadaha » Bisad shukulaatada York, oo ah tan dhogorta leh ee dooneysa inay noqoto bakhaar
Sidee loo aqoonsadaa qaniinyada boodada?
Maxuu cunug yar cunaa